ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပီးတဲ့နောက် နှလုံးခုန်တွေ အရမ်းမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ အိအိ – Shwe Likes
Shwe | January 26, 2022 | Celebrity | No Comments
အဆိုေ တာ် အိအိ ကတော့ တစ်ခေ တ်တစ်ခါက အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ တေးသံ ရှင်ကြီးတစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိအိရဲ့သား နဲ့သမီးဖြ စ်နဲ့ ချမ်းေြ မ့မောင်ချိုနဲ့ သူရေ မာင်ချိုတို့က လည်း အနုပညာ လမ်းမမှာ ကိုယ်စီလျှော က်လှမ်းေ နကြတာဖြစ်ပြီး အောင်မြင် မှုတွေအ ထိုက်အလျောက်ရ ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီကနေ့မှာေ တာ့ အိအိက ကိုဗစ်ဖြစ်ြ ပီးတဲ့အပြင် နှလုံးခုန်တွေအရ မ်းမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ကျ န်းမာရေး အခြေအနေကိုပြောြ ပလာပါတယ်။
အိအိ က “ကျမသမီး. July 3rd wave မှာ ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ ဆေးကု သလိုက်ရပါတ ယ်😔 Post covid နှလုံးအရမ်းခုန်ပြီး မလှုပ် နိုင်ဖြစ်လို့ ဆေးဆက် ကုရပါ တယ်.😩 ပထမ Sinopharm ၂ ကြိမ်ထိုးပါတယ်။ ခု Covitshield ထိုးပါတယ်..👍🏽
ဆေးအရှိန်ကြောင့်လား ချွဲချင်လို့ လားမသိ 🙄 အကိုက်အ ခဲပျောက်ဆေး တိုက်ပြီး ဆေးထိုးတဲ့နေရာ နာတယ်ဆိုလို့ ရေခဲအုံပေး ရပါတယ်..အမယ်မင်း မောထာဟယ်🥴😁🥰” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်း တဲ့အချိ န် မေမေ့အနား မှာနေရင်း အချွဲပိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချမ်းမြေ့မောင်ချို တစ်ယောက် အမြန်ဆုံးကျန်း မာစေဖို့ ဆုတောင်းေ ပးကြပါဦးနော်။ Source: Ei Ei’s fb
အဆိုေ တာ္ အိအိ ကေတာ့ တစ္ေခ တ္တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ ေတးသံ ရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိအိရဲ့သား နဲ႔သမီးၿဖ စ္နဲ႔ ခ်မ္းေျ မ့ေမာင္ခ်ိဳနဲ႔ သူေရ မာင္ခ်ိဳတို႔က လည္း အႏုပညာ လမ္းမမွာ ကိုယ္စီေလၽွာ က္လွမ္းေ နၾကတာျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ မႈေတြအ ထိုက္အေလ်ာက္ရ ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီကေန႔မွာေ တာ့ အိအိက ကိုဗစ္ျဖစ္ျ ပီးတဲ့အျပင္ ႏွလုံးခုန္ေတြအရ မ္းျမန္ၿပီး မလႈပ္ရွားနိုင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳရဲ့က် န္းမာေရး အေျခအေနကိုေျပာျ ပလာပါတယ္။
အိအိ က “က်မသမီး. July 3rd wave မွာ ကိုဗစ္ျဖစ္လို႔ ေဆးကု သလိုက္ရပါတ ယ္😔 Post covid ႏွလုံးအရမ္းခုန္ၿပီး မလႈပ္ နိုင္ျဖစ္လို႔ ေဆးဆက္ ကုရပါ တယ္.😩 ပထမ Sinopharm ၂ ႀကိမ္ထိုးပါတယ္။ ခု Covitshield ထိုးပါတယ္..👍🏽
ေဆးအရွိန္ေၾကာင့္လား ခၽြဲခ်င္လို႔ လားမသိ 🙄 အကိုက္အ ခဲေပ်ာက္ေဆး တိုက္ၿပီး ေဆးထိုးတဲ့ေနရာ နာတယ္ဆိုလို႔ ေရခဲအုံေပး ရပါတယ္..အမယ္မင္း ေမာထာဟယ္🥴😁🥰” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳ ကေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္း တဲ့အခ်ိ န္ ေမေမ့အနား မွာေနရင္း အခၽြဲပိုေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳ တစ္ေယာက္ အျမန္ဆုံးက်န္း မာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေ ပးၾကပါဦးေနာ္။ Source: Ei Ei’s fb
ကွယ်လွန်သွားပီဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီး အတွက် လုပ်ပေးချင်တဲ့ဆန ္ဒတစ်ခုကို မသေခင်ဖြည့်ဆည်းခွင့်ရခဲ့တာကြောင့် ပျော်ပြီး ငိုခဲ့ရဖူးတယ် ဆိုတဲ့ Russell
တစ်ယောက်တည်း လှေကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ လှော်ပြ လိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဝတ်မှုံရွှေရည်
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ လှူဒါန်းထားတယ် ဆိုတဲ့ မင်းသမီးချောလေး မေသက်ခိုင်